CudaSign raha hanao sonia nomerika mora sy hameno antontan-taratasy | Androidsis
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, Fanovana PDF, Takelaka Android
Androany aho te-hanolotra fizarana vaovao anao ao amin'ny Androidsis, mpisava lalana amin'ny fombany ary tsy ho hitanao ihany eto izay hanoloranay anao matetika, ireo fampiharana tsy maintsy ananana amin'ny Takelaka Android. Araka ny efa nolazaiko anao, ny faritra misy ny mpisava lalana misy azy ireo, mikendry ny hanolotra ireo rindranasa tsara indrindra hankafizanao amin'ny Takelaka Android anay.
Amin'ity lahatsoratra voalohany ity amin'ny maha premiere ahy dia te-hahita fampiharana miorina tanteraka amin'ny famokarana aho, na amin'ny ekipa miasa, izay hahafahanay sonia nomerika ary fenoy ny karazana antontan-taratasy maimaimpoana tanteraka amin'ny maody manokana ary amin'ny euro iray isam-bolana fotsiny amin'ny fomba fiaraha-miasa na ekipa. Ny fampiharana, mahay manasonia ary mampihatra antontan-taratasy PDF mihitsy aza mamaly ny anaran'ny Cudasign Ary avy eo asehoko anao ny zavatra rehetra mety ampiharin'ity rindran-damina ilaina amin'ny takelaka Android ity sy amin'ny ankapobeny ho an'ny karazana terminal rehetra ho antsika.
1 Inona no atolotry ny CudaSign antsika?
2 Fomba fiasa CudaSign
3 Sintomy maimaimpoana ny CudaSign amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny CudaSign antsika?
CudaSign, lavitra ny fanaovana izay lazain'ny anarany fotsiny fa tsy inona izany fa ny afaka manao sonia nomerika antontan-taratasy na inona na inona karazany, manolotra antsika ny mety hisian'ny ampiharo izy ireo na fenoy ny saha izay heverinay fa mety na ilainay.
Anisan'ireo fiasa asongadiny, marihina fa izy io maimaim-poana tanteraka ho an'ny fampiasana manokana ary iray euro isam-bolana fotsiny no vidiny amintsika raha te hanana fahazoan-dàlana hampiasa ekipa na fiaraha-miasa izahay.
Na dia tsy izany rehetra izany aza ny fahafahan'ny cudasign manolotra antsika. Ireto ambany ireto dia tanisiko tsirairay ny asany sy ny toetra mampiavaka azy.
Fomba fiasa CudaSign
Mety ho an'ny karazana rakitra an-tsoratra manan-karena, rakitra an-tsoratra na na fisie PDF aza.
Fifanarahana sy fitehirizana an-tserasera ny antontan-taratasinao rehetra.
Mety hitrandrahana sonia mihoatra ny iray.
Fifanarahana amin'ny Dropbox, googledrive, Box.
Azo atao ny manara-maso antontan-taratasy amin'ny fakan-tsarimihetsika Android anao hanasonia na hamenoana azy ireo.
Safidy hanodinana antontan-taratasy.
Tsy misy fetran'ny antontan-taratasy isam-bolana na ora.
Azo atao ny mitahiry ny maodelinao manokana mifototra amin'ny tahirin-kevitra rehetra misy azy ireo raha ilaina izany.
Fenoy izay antontan-taratasy raisina amin'ny alàlan'ny mailaka ary alefaso tsy mila fanontana azy ireo.
Sintomy maimaimpoana ny CudaSign amin'ny Google Play Store
sonia izao: sonia antontan-taratasy PDF
Developer: Sonia izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fanovana PDF » Fampiharana tena ilaina amin'ny Takelaka Android: Androany CudaSign hanasonia nomerika ary hameno antontan-taratasy
John Bta. Borrero M. dia hoy izy:
Salama Andriamatoa Francisco Ruiz, manoratra aminao aho avy any Caracas-Venezoela, mangataka anao hanampy ahy hanavao ny fitaovako izay hanomezako anao antsipiriany raha mandefa adiresy mailaka amiko ianao hanazavana ny zavatra ilaiko.
Valiny tamin'i Juan Bta. Borrero M.
Meizu M2 dia efa zava-misy ary amin'ny vidiny tsy azo resena